वेब मार्फत कसरी प्रीमियम गुणवत्ता अडियो रेकर्ड गर्ने Martech Zone
स्काइप, टेलिकोनन्फर सफ्टवेयर, र वीओआइपी जस्ता समाधानका साथ तपाई एक अर्काबाट दुई व्यक्तिको रेकर्ड गर्नु नै संसारको सब भन्दा सजिलो चीज हुनेछ भन्ने सोच्नुहुन्छ। होइन। र यो धेरै निराश छ।
निश्चित गर्नुहोस्, यदि तपाईंसँग उत्कृष्ट उपकरणहरू र उच्च ब्यान्डविथको साथ दुई व्यक्तिहरू छन् भने, यो गर्न सकिन्छ। समस्या उत्पन्न हुन्छ जब तपाईंसँग तपाईंको पोडकास्टमा विश्वभरिबाट अतिथिहरू छन् जससँग या त हार्डवेयर वा ब्यान्डविथ छैन। परिणाम यो छ कि तपाईंसँग प्राय: अन्तर्वार्ताहरू हुन्छन् जहाँ तपाईं अद्भुत सुन्नुहुन्छ, र तपाईंको पाहुनाको आवाज जस्तो उनीहरू स्ट्रिंग र टिन क्यानमा छन् जस्तो छ।
उत्कृष्ट गुणस्तरको अडियोले 320२० केबीपीएस वा ब्यान्डविथको अधिक खान्छ, त्यसैले अडियो ट्रान्समिशन सेवाहरू कम्प्रेस गर्न वा क्लिप अडियो तिनीहरूको ब्यान्डविथ आवश्यकताहरू कम गर्न वा कम ब्यान्डविथका ग्राहकहरूलाई फाइदा पुर्‍याउन असामान्य कुरा हैन। जे भए पनि, रेकर्डि when गर्दा यो तपाईको लागि राम्रो छैन।
केहि सामान्य भ्वाइस प्लेटफार्महरू र मुद्दाहरूको माध्यमबाट हिँडौं:
स्काइप - जबकि स्काइप व्यापक रूप बाट अपनाईएको छ र प्राय: कर्पोरेट फायरवालको पछाडि उपलब्ध छ, अडियो प्रसारित अडियो सधैं यसको पूर्ण गुणमा हुँदैन। राम्रो माइक्रोफोन र ब्यान्डविथको साथ पनि, आवाज क्लिप गर्न सक्दछ र प्रत्येक स्रोतको ईमान्दारीको कमी हुन सक्छ। र यदि तपाईं स्काईप रेकर्डर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं प्रत्येक भ्वाइस ट्र्याकमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्न।
Teleconferences सफ्टवेयर - व्यवसायका लागि स्काइप, Webex, GoToMeeting, Uberconferences… सबै ठोस प्लेटफार्महरू तर तिनीहरूले केहि अवरोधहरू छन्। पहिलो, सबैजनाले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्दैनन्। दोस्रो, उद्यमहरूले प्राय: पोर्टहरू ब्लक गर्दछ जुन सफ्टवेयरको आवश्यक पर्दछ। तेस्रो, उनीहरूसँग जहिले पनि उत्तम अडियो गुण हुँदैन, कि त। चौथा र सबैभन्दा नराम्रो - यदि तपाईं लाइन बन्द दस्तक पाउनुभयो भने, धेरै प्लेटफर्महरूले तपाईंलाई पुनः संलग्न हुन अनुमति दिँदैन।
वीओआइपी - तपाई सोच्नुहुन्छ कि लगभग सय शताब्दी पछि फोन टेक्नोलोजी कि हामीसँग यो हरायो। हामी गर्दैनौं। VOIP टेक्नोलोजी जताततै छ, तर यो एक गडबड छ। तपाईं प्रायः सेवाहरू र लेयरहरूको समूहमा जडान गर्दै हुनुहुन्छ, मुद्दाको लागि एक टन अवसर थप्दै। र, अन्य संचार टेक्नोलोजीहरू जस्तै उनीहरूले आफ्नो ग्राहकहरूको भिन्नै ब्यान्डविथ क्षमताहरूको सामना गर्न कम निष्ठाको लागि अनुमति दिन्छ।
धन्यबाद, पोडकास्टिंग यस्तो प्रतिष्ठामा बढेको छ कि त्यहाँ यी केहि समस्याहरू पार गर्न पप्पिंगहरू केहि धेरै सेवाहरू छन्।
पोडकास्ट रेकर्डि Services सेवाहरू
BlogTalkRadio - हामीले BTR मा धेरै ठूलो पालना गरेका थियौं तर अन्ततः तिनीहरूको प्लेटफर्ममा क्वालिटी मुद्दाहरूको कारणले त्यसलाई छोडिदियो। हामी उनीहरूको वास्तविक-समय वेब इन्टरफेस पूर्ण रूपमा त्यागेर घायल भयौं र हाम्रो सामग्री पोष्ट-लोडिंगको लागि रोज्यौं। जे होस्, यदि तपाई भर्खर सुरू गर्दै हुनुहुन्छ भने, केहि साधारण चाहानुहुन्छ, यो सहि समाधान हुन सक्छ। हाम्रो महान अडियोको लागि क्वेस्टमा, यो बस्ट थियो।
बोडल्गो - बोडल्गो वास्तवमा यसको लागि निर्मित सेवा होइन ... यो आवाज-ओभर र अनुवाद प्रतिभा अनलाइन खोज्न र परिणामहरू रेकर्ड गराउनको लागि निर्माण गरिएको हो। जे होस्, बोडल्गोले पोडकास्टर्सको उपयोगको लागि सेवा प्रमोट गरेको छ। तपाईं एक अद्वितीय यूआरएल पाउनुहुन्छ जहाँ तपाईंको अतिथिले जडान गर्दछ, उनीहरूको माइक्रोफोनमा अनुमति सक्षम गर्दछ, र तपाईं जडित हुनुहुन्छ र स्थानीय रूपमा उच्च निष्ठा अडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। Bodalgo ले हालसालै भिडियो क्षमताहरू पनि थपे!
आईपीडीटीएल - ipDTL एक स्थापना गर्न कोशिस गर्नेछ पियर टु पियर पाहुनाहरू बीचको जडान र अडियो रेकर्डको लागि क्रोम-आधारित ईन्टरफेस प्रदान गर्दछ। सेवा एक समर्पित शो पृष्ठको साथ आउँदछ र पाहुनाहरू डायल-इन गर्न सक्दछन् यदि उनीहरू चाहानुहुन्छ भने।
रिंगर - यो सेवाको सबै भन्दा राम्रो विकल्पको रूपमा मेरो भोट हुन सक्छ, तर यो अझै केही सीमाहरू बिना नै छैन। किन म यस दिशामा झुकाव छ भन्ने छ कि RINGR दुबै एक डेस्कटप संस्करण र एक मोबाइल अनुप्रयोग प्रदान गर्दछ। यदि तपाईं आफ्नो पाहुनालाई मोबाइल अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र उनीहरूसँग ठूलो माइक्रोफोन छ, तपाईं व्यवसायमा हुनुहुन्छ!
स्रोत - जडान - तपाईंको सबै रिमोट अडियो रेकर्डिंग र निगरानी आवश्यकताहरूको लागि गहिरा फिचर-सेटको साथ उद्योग-मानक ISDN प्रतिस्थापन। रेकर्ड र निगरानी दुनिया मा कहीं बाट, तपाइँको पेशेवर उपकरणहरु को उपयोग गरेर।
Zencastr - हामीले यस बारे साझा गरेका छौं Zencastr अघि, पोडकास्टहरूको लागि उत्कृष्ट मल्टि-ट्र्याक अनलाइन रेकर्डिंग सेवा। दुर्भाग्यवस, यसको लागि डेस्कटप ब्राउजर आवश्यक पर्दैन जुन माइक्रोफोनको लागि अनुमति चाहिन्छ।
र त्यो माइक्रोफोनको बारेमा के छ? यदि तपाईं आफ्नो म्याक वा आईफोनबाट सिधा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, म यसको ठूलो फ्यान हुँ Apogee को MiC 96k। यदि तपाईं पोडकास्टर हुनुहुन्छ जुन यात्रामा छ र तपाईंको आईफोनबाट एक वा बढी पाहुनाहरू रेकर्ड गर्न आवश्यक छ भने, श्युरले मलाई एक पठायो MV88 कन्डेनसर माइक्रोफोन, र यो आश्चर्यजनक छ!
नोट: तपाइँ जेनेकास्टर, RINGR, र IPDTL को वर्तमान मा कहाँ, को केहि उत्कृष्ट परीक्षण पाउनुहुनेछ एडम रागुसेआले गहिरो लेख लेखेका थिए प्रत्येक सेवा र यसको क्षमताहरूमा।
खुलासा: अब हामी RINGR को सम्बद्ध छौं र हाम्रो प्रयोग गरीरहेका छौं सम्बद्ध लिङ्क यस पोष्टमा हामीले माइक्रोफोनका लागि हाम्रो अमेजन सम्बद्ध लिंक पनि प्रयोग गर्‍यौं।
टैग: Blogtalkradioबोडल्गोसम्मेलन कलआईपीडीटीएलमार्केटिंग पोडकास्टपियर टु पियरपोडकास्ट सेवाहरूपोडकास्टिङरिंगरSkypeteleconferenceभ्वाइसzencastr
मार्स 21, 2017 मा 12: 39 एएम
डग, रेडियोयो अर्को प्लेटफर्म हो जुन तपाईंलाई अडियो रेकर्ड गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं प्लेटफर्म दुई तरिकाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं या त लाइभ स्ट्रिम गर्न सक्नुहुनेछ र धेरै पाहुना र कलरहरू कल गर्न वा पोडकास्ट एपिसोडहरू अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं कसरी प्लेटफर्म प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईंमा निर्भर छ, र कुनै पनि हिसाबले स्वतन्त्र छन्।